IApartment yeStudio eyodwa - I-Airbnb
IApartment yeStudio eyodwa
Ikhaya elihlala kwindawo yokuhlala iMvubu apho zizulazula ezitalatweni. ISt. Lucia likhaya elikhethekileyo labantu nezilwanyana zasendle. Iindwendwe zam ezisuka kude nakude zikonwabela ububele basekhaya, ubuhlobo kunye noburharha obuhle be-nautical.
Bakhenketha ngenqanawa echibini bejonga iimvubu, iingwenya, iintaka kunye nezilwanyana zasendle. Ukhenketho oluya eMpuma noNxweme oluseNtshona lwePaki ye-Isimangaliso Wetland, (imini nobusuku), kuqukwa ukuqubha kulwandle olumangalisayo lweCape Vidal Beach, ukunyoka, ukubukela ufudo kunye nokuhambahamba. Ukubukela umnenga. Ukukhwela ihashe elunxwemeni. Ukhenketho lweentaka ezikhokelwayo, ukuhamba okanye ngeebhayisekile. Ukhenketho olukufutshane ukuya eMfolozi-Hluhluwe Game Reserves okanye nje Self-drives kuzo zonke iiPaki, (4x4 drive akukho mfuneko).
Ukuya kunxweme lwegolide oluphefumlayo kunye nokujonga iMapelane, indawo yesibini ephezulu yeendunduma zentlabathi eselunxwemeni emhlabeni. Ukhetho lweendawo zokutyela ezahlukeneyo kunye neendawo zokutyela.
Indawo yeBraai / BBQ. Indawo yokupaka ekhuselekileyo. Vala umgama wokuhamba ukuya kwiindawo zokutyela.
Ukhenketho lunokulungiswa nguMamkeli wakho lubandakanya: Ukuhamba ngenqanawa eLake ukubukela iimvubu, iingwenya, iintaka kunye nemidlalo. Ukhenketho oluya eCape Vidal kuNxweme oluseMpuma kunye noNxweme oluseNtshona lwe-Isimangaliso Wetland Park, (imini nobusuku), kuqukwa ukuqubha, ukunyoka, ukubukela ufudo kunye nokuhamba. Ukubukela umnenga. Ukukhwela ihashe elunxwemeni. Ukhenketho lweentaka ezikhokelwayo, ukuhamba okanye ngeebhayisekile. Ukhenketho olukufutshane ukuya eMfolozi-Hluhluwe Game Reserves okanye nje Self-drive kuzo zonke iiPaki, (4x4 drive akukho mfuneko).
Ndiyafumaneka ukuze ndincede iiNdwendwe ngokubhukishwa kokhenkethi kunye neengcebiso ngokubanzi malunga nento omawuyenze, indawo omawuye kuyo, iindawo zokutyela, iibhari kunye neendawo zokutyela, (ubukhulu becala kumgama wokuhamba). Ngesicelo ndinikezela ngeBraai yaseMzantsi Afrika kunye / okanye ipotjiekos. (Iphekwe ngembiza yetripod phezu komlilo).
ISt. Lucia likhaya elikhethekileyo labantu nezilwanyana zasendle. Iindwendwe zam ezisuka kude nakude, zonwabele ububele basekhaya, ubuhlobo kunye noburharha obuhle be-nautical. Igadi kunye ne-braai / indawo ye-BBQ.
Ndiyafumaneka ukuze ndincede iiNdwendwe ngokubhukishwa kokhenkethi kunye neengcebiso ngokubanzi malunga nento omawuyenze, indawo omawuye kuyo, iindawo zokutyela, iibhari kunye neen…